Sidee la isku waafajinayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah lana tixgeliyo 4.5? – Banaadir Times
Sidee la isku waafajinayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah lana tixgeliyo 4.5?
By banaadir 29th December 2019 186
Madaxweynaha ayuu sharcigu qorayaa inay dooran doonaan xubnaha Golaha Shacabka iyo kuwa Aqalka Sare, halka Ra’iisul Wasaaraha uu soo magacaabi doono xisbigii ku guulaysta aqlabiyadda baarlamaanka.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, gudoomiyaha Xisbiga Garsoor oo ka mid ahaa xildhibaanaddii ansixiyay sharciga doorashada ee dalka, ayaa sheegay in marlkii hore shanta dowlad goboleed iyo dowladda dhexe ku heshiiyeen shantii bishii June ee 2018-kii, doorashada nooca isku dheeli tiran ee liiska kaasi oo ay xisbiyada kaliya ogyihiin balse shalay lama ansixin noocaasi.
Balse Su’aasha taagan ayaa ah sidee ayay doorasho qof iyo cod ah ku dhaceysaa iyadoo la tix galinayo nidaamka 4.5?
”Arrintaasi waxaa looga fadhiyo iney xisbiyada ilaaliyaan, marka horeba waxaa sanduuqyada la geeynayaa deegaanada kala duwan ee dalka oo dadkaasi ayaa dooranaya qofkii iyaga baarlamaanka ku matali lahaa, marka qof kale ma iman karo oo aan deegaankaasi u dhalan sidaas ayaan lagu ilaalinayaa nidaamka 4.5”. ayuu yiri Xidhibaan Zakariye
Sharcigan oo shalay la marsiiyay akhrinta 3aad ayay Xildhibaannada si weyn uga doodeen qodobka 53aad ee sharciga oo dhigaya haddii duruufi amni, xaalado aafooyin dhacaan iyo arrimo farsamo doorashada dib ugu dhacdo in lix bilood muddo kororsi ay dhici doonto.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmaya Xubno ka tirsan Beesha Caalamka